China Camouflage RPET Bhegi 100% Yakagadziriswazve Nyaya Pocket Sport Sisitimu Yekumhanya Bhegi Inotakurika Yemafashoni mutumwa bhegi yefekitori yeunisex | Changlin
Camouflage RPET Bhegi 100% Yakagadziriswazve Zvinhu Pocket Sport Sisitimu Yekumhanya Bhegi Inotakurika Nyowani Mufashoni mutumwa bhegi reunisex
Iyi RPET pateni ndeye kufukidza iyo inotaridzika kunge tsvarakadenga seye musoja.Camouflage kudhinda kwakagadzira bhegi kuti ive inofadza uye inotonhorera.
Zvinhu: RPET Kurema:
Saizi: 36.5L * 9.5W * 17Hcm Kuvhara: zipi
Kushanda: kutenga, kumhanya, zuva nezuva
Kubatsira: Camouflage, Inotakurika, Mufashoni, inoshanda, inogadziriswa
Simbisa muna 2017, Changlin ndiro davi rebazi reJiafeng Plastic Zvigadzirwa CO., LTD ine makore anopfuura makumi maviri ezviitiko zvemasaga kugadzira.Iri bhegi iRPET 100% inogadziriswazve.Izvi zvinhu hazvisi nyore kunyorova.Pasipo, zvinobatsira hupenyu hwezuva nezuva uye fashoni yevarume nevakadzi.
Micro Side Kutarisa
Maitiro ekuvharidzira anowedzera pfungwa yekutonhorera. Mukati mehombodo, mune imwe diki diki ine kuvhara zipi kuisa imwe yakakosha kadhi rebhangi, nezvimwe zvinoshanda chaizvo uye dhizaini ine mutsa.
Sekugona, Inokwana kuvanhu kana vachimhanya nekutenga. Saizi yayo iri 36.5L * 9.5W * 17Hcm inogona kuisa foni yako, pasi pemvura, nyama, nezvimwe.
Mawiri-nzira ekudhonza musoro iri nyore kune vanhu vane tsika dzakasiyana.
Iyi dhizaini ine mutsa kwazvo yakakodzera kune vanhu vane akasiyana maumbirwo.Iyo iri nyore kutakura uye kubvisa.
Kambani yedu inyanzvi yemabhegi inogadzira.Nemweya we "kuzvipira, kuvandudza, kubatana, kushanda nesimba" uye maitiro ebasa rekuve "anoshanda, anoshanda, anotaurirana, akasarudzika", vese vashandi vanopa vatengi vekare uye vatsva Zvakanakisa zvigadzirwa uye sevhisi Iwe uchafarira iro rakanyanya nyanzvi timu kuti ikushandire iwe!
Pashure: RPET ine yakazara yekudhinda zvizorwa kurongedza bhegi ruva zipi tampu inotakurika homwe goko chimiro
Zvadaro: Hove RPET Bhegi 100% Yakagadziriswazve Nyaya Pocket Sport Sisitimu Yekumhanya Bhegi Inotakurika Nyowani Mufashoni mutumwa bhegi reunisex
Fashoni PU cosmetic makeup bhegi zororo package ...
100% Polyester Bhegi Bata Kuvhara Kunogara C ...
TPU zvizorwa Bags Eco-ushamwari Degradable Iride ...
Eco-ushamwari zvishandiswezve Eva 3D eyelets zvinhu c ...
Cotton Canvas Bag Kufamba Makeup Zvizorwa Bhegi WI ...